Ngabe isasebenza le nombolo yeGagasi? | Isolezwe
Ngabe isasebenza le nombolo yeGagasi?
Isolezwe / 10 July 2012, 11:38am /
KUMELE isiteshi iGagasi sicacise ngokuzikhangisa ngenombolo esitholakayo kuyo u-99.5 FM njengoba kwezinye izindawo sitholakala ngezinye izinombolo. Lapha umsakazi u-Alex Mthiyane wayekhuluma emcimbini wokwethula lesi siteshi nalapho kwagqanyiswa khona ukuthi sizokwaziwa ngeGagasi 99.5 FM
ISITESHI somsakazo saseThekwini esenza inzuzo, iGagasi, kuzomele sicacise ngendawo esitholakala kuyo (frequency) u-99.5 FM.
Ngesikhathi uqala lo msakazo kade usakazela abantu baseThekwini kuphela kodwa manje sewusabalele nesifundazwe iKZN njengoba usutholakala nasezindaweni ezingaphandle kwaleli dolobha.
Ngesikhathi uzethula lo msakazo uchaza nangesiqubulo sawo, wabiza abezindaba wabachazela ngokuthi lesi siteshi sizobizwa ngokuthi yiGagasi 99.5 FM.
Usuthanda ukudida-ke lo 99.5 FM njengoba kwezinye izindawo lesi siteshi sitholakala kwenye indawo.
Isibonelo uma usezindaweni ezingakoLundi, lo msakazo utholakala ku-94.7 kanti koPort Shepstone utholakala ku-103.
Ngokwami kubalulekile ukuthi ubabize abezindaba, uwuchaze lo mehluko yikhona bengeke abalaleli badideke ngezikhangisi zesiteshi ezithi “Gagasi 99.5 FM” ekubeni bona bewulalele kwenye indawo.
Neminye imisakazo yakuleli ayitholakali endaweni eyodwa, iyehluka ngezindawo kodwa ezikhangisini zayo iyaye isho ukuthi idolobha elithile likwazi ukuyilalela kuyiphi indawo.
Ngempelasonto ngike ngaba nenhlanhla enkulu yokuhlangana nesinye isikhulu esiphezulu kulo msakazo, sikhulume isikhathi eside ngawo, nami kwanezinto engigcine ngiziqonda ngawo kodwa ebengingaziqondi.
Ngithe uma ngimbuza ngalolu daba lwalezi zinombolo wathi khona azisenasidingo ngoba iGagasi FM selitholakala ezindaweni eziningi ezingaphandle kweTheku, lo 99.5 ngowabantu abahlala eThekwini nasezindaweni ezisondelene naleli dolobha.
Lesi sikhulu siveze nokuthi iGagasi FM linamandla amakhulu kulezi zindawo ezingekho eThekwini.
Kodwa-ke ngicabanga ukuthi singanyuka kakhulu isibalo salo msakazo uma kungukuthi nabo bayayihambela imicimbi yabanye abantu, hhayi ngoba bemenyiwe kodwa ukuzwa nje ukuthi abalaleli bathandani.
Nginokubabona abasakazi beGagasi FM emicimbini kodwa uma uthi uyalandela uthole ukuthi lowo msakazi ukhona ngoba eqashiwe ukuthi azosebenza noma kube wukuthi into ithinta lona iGagasi FM. Uma ungumsakazi ngicabanga ukuthi kubalulekile ukuzihambela izindawo.
Ngempelasonto ngithe ngisathokozela ukubona uMsizi Shembe ezixoxela futhi ebingelelana nabantu, gwiqiqi ngambona esedlala.
Lokhu kusho khona ukuthi ubekhona ngoba ezosebenza. ngingakujabulela ukumbona ezozixoxela nabantu ngenhloso yokuthola ukuthi abantu bathini ngomsakazo awusebenzelayo.
Ngiphinde ngabona uMzokoloko Gumede noJacinta Ngobese. Kamuva ngathola ukuthi nomsakazo wabo unesandla kulo mcimbi ebesikuwona. Kungakuhle ukuthi abasakazi bazijwayeze ukuhambela imicimbi ngoba ngeke belokhu betapunwa ngabantu ngoba kabaziwa, kunalokho kwaziwa amaphimbo abo.
Kunabasakazi abafana noFresh no-Euphonik, kumnandi ukuzwa uFresh ekutshela ukuthi akasebenzi kodwa uphelezele uFresh yena uzozibonela abantu.
Ngikholelwa wukuthi isibalo sabalaleli kasinyuswa kuphela wukuthi usakaza kanjani kodwa nokuthi uxhumana kanjani nabalaleli ngisho ungekho emoyeni.